Galmee barruu irratti, saxaatotti, gabatetti, goodayyaaf, Wantoota fakkasatti lakkoofsa goodayyaa fufaa ida'u nidandessa.
Akaakuuwwan qabiiwwan garagaraf hammanga lakkoofsaf barruu gulaalu nidandessa.
Suuraatti ykn wantatti, yammuu ati qabii idaatuu, qabii haaraa keessatti wantaa fi barruun qabii waliin taa'u. Yammuu ati qabii gabateetti idaatuu, barruun qabii gabatee itti aanee akka keewwataatti saagama. Yammuu ati qabii, qabiitti idaatuu, barruun qabii, barruu qabii keessaatti duras tahe booda barruu jiraatti ida'ama.
Wantaf qabii lamanu siqsuuf, qabii issa Wantoota offkeessatti qabaatan harkissi. Qabii errga siqsitte booda lakkaawwii qabii haaromsuf F9 dhibii.
Goddayyaa Qindeessuuf akka gadiitti itti fufi:
Maalimaa isa qabiitti ida'uu barbaduu fili.
Saagi - Qabii fili.
Dirqala barbaduu fili, kana booda TOLEE cuqaasi. Yoo barbadde, dabalataan barruu addaa galchuu dandeessa Akaakuu sanduuqa, fakkeenyaaf Fakkii.
Galmee irratii qabii barruu suduudan gulaalu nidandessa.
Qabiin akkaataa keewwataa warra Akaakuu maqaa qabiitiin walsimaniin dhangeefame. Fakkeenyaaf, yoo ati qabii "Gabatee" saagdee, akkaataan keewwataa "Gabatee" barruu qabiitti fayyadama.
Lakkoofsa Boqannaa Qabiiwwanitti Ida'uu
Title is: Goodayyootaa Fayadamu